China uqine kunye nophahla eyenziwe ngerabha ezenziwe ngomthi kunye nemveliso | Igolide yoqalo
Umgangatho owomeleleyo kunye noxinano lomgangatho wokhula oluhlangeneyo
Uninzi lweebhodi ze-bamboo zokuhombisa ngoqalo zakhiwe nge-1.86m, 2.2m kunye no-2.5m okanye ngaphezulu ubude (6.1, 7.2, 8.2 iinyawo) iibhodi, kwaye obu bude budumileyo buza ngexabiso leprimiyamu. Phakathi kolu bude, i-1.86m lelona banga lide kwaye lelona lisetyenziswa ngokubanzi. Sebenzisa iibhodi zobude obufutshane kunokukugcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-25 ekumiseni.
Kucacile ukuba ukhuni lwetropiki lwalungaphandle kombuzo ngenxa yendalo. Inyaniso ibonisa ukuba i-REBO® Bamboo decking decking iyazifezekisa zonke iimfuno: Ziye zahlulwa kwiklasi yokuqina 1 kwaye zisebenzisa iklasi 4 ngokwe-EN350 / EN335, enongwe ngomlilo iklasi ye-Bfl-s1 ngokwe-EN 13501-1. Iibhodi zihlangabezana nomgangatho we-E1 waseYurophu, ukukhutshwa kwayo ngokusesikweni emoyeni yi-0.05mg / m3 ngokwe-EN 717-1. I-bamboo yomelele kwaye yomelele ngakumbi kunemithi, eyenza ukuba ibe yinto efanelekileyo yokwakha indawo yokuhlala ngaphandle enjengeepaki kunye neepatios.
Uninzi lweebhodi ze-bamboo zokuhombisa ngoqalo zakhiwe nge-1.86m, 2.2m kunye no-2.5m okanye ngaphezulu ubude (6.1, 7.2, 8.2 iinyawo) iibhodi, kwaye obu bude budumileyo buza ngexabiso leprimiyamu. Phakathi kolu bude, i-1.86m lelona banga lide kwaye lelona lisetyenziswa ngokubanzi. Sebenzisa iibhodi zobude obufutshane kunokukugcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-25 ekumiseni. Ke sukucinga ukuba elona xesha lide lelona lilungileyo. I-REBO icebisa ukuba uthathe ubude be-1.86m, ethandwa kakhulu kwihlabathi liphela. Inkqubo ekhethekileyo yokucinezelwa kwekhabhoni kunye neshushu isenza uxinano oluphezulu, olunobungqongileyo, oluzinzileyo nolomeleleyo. Inkqubo yolwimi kunye neentloko ezinikezela zinika indlela elula yokudibanisa. Amacala ane-grooved anokufakwa ngomboniso wentsimbi engenasici kwaye abonise ukujongeka okuhle ngaphandle kokubona iziqwengana.
Egqithileyo Uxinzelelo olushushu kumgangatho ophezulu wophahla onzima ongaphandle
Okulandelayo: Iphaneli yentsimbi eyomeleleyo ethe tye